Ninki la sheegay in uu iska dhigayay dhaqtar oo damiin lacageed lagu sii daayay – The Voice of Northeastern Kenya
Ninki la sheegay in uu iska dhigayay dhaqtar oo damiin lacageed lagu sii daayay
Ronald Melly oo 28 sano jir ahaa islamarkaana isninti aynu soo dhafnay xabsiga loo taxaabay kadib markii la qabtay isagoo aan khibrad u laheen dhaqtirnimo oo ka howlgalayay Isibitaal kuyaala Nandi ayaa shalay lagu sii daayay damiin lacageed.
Mr Melly ayaa lagu soo eedeeyay in uu daaweyn jiray dadka bukaanada ah, sidaas si lamid ahna uu sameynayay qaliin isaga oo aan khibrad u laheyn oo uu u soo aqrisanin xirfadaasi.
Waxaa eedeysanahan oo sidoo kale lagu dacwadeeyay afar dacwadood oo kale ay oo ay kamid ahaayen in uu isticmaalayay ducumentiyo been abuur ah iyo in uu qatar galiyay nolosha dad badan oo Kenyan ayaa waxaa markii dambe lagu sii daayay damiin dhan 500,000 oo shilinka dalka.
Xaakinka maxkamada uu kasoo hormuqday E. Juma ayaa shegtay in kiiskan in la xusi doono 13-ka bishan fooda inagu soo hayso ee Disemba islamarkaana dhageysiga uu noqon doono 13-ka bisha marso ee sanadka soo socda.
Goor sii horeysay ayeey eheyd markii Jaamacada Nairobi ay beenisay in ninkaasi uu xirfdani kasoo aqrisay Jaamacada, waxayna sheegen in waligiisa uusan cagta saarin Jaamacada sida horay uu ugu doodayeeyba.
Waxaa Ronald laga qabtay xarunta ururka ay kubahooben dhaqaatirta iyo farmishiyayaasha ee KMPDU xiligaas oo uu doonayay in uu soo cusbooneysiisto lisenkii uu ku shaqeynayay.
Waxaa ilaa hadda la is weydinayaa habka uu eedeysanahan ku noqday dhaqtar islamarkaana uu u qornaa wasaarada caafimadka kadib loo magacaabay kormeeraha isbitaal kuyaala Maamul goboledka Nandi.
← Hay’adaha u dooda xuquuqda biniadanka oo walaac ka muujiyay howlgalka booliska ay ka wadaan magaalada Mumias
Gavanaha Kilifi oo sheegay in uu diyaar u yahay in uu hortago gudiga EACC →